Zava-Mahadomelina Vs. Namana | Desambra 2021
Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fahasalamana Fiaraha-Monina Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Orinasa, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Pets Fialam-Boly Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fiaraha-Monina, Fahasalamana Orinasa
Abilify vs Seroquel: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Abilify sy Seroquel dia samy voatendry hitsaboana schizophrenia. Mampitaha azy ireo mifanila izahay mba hahafahanao manapa-kevitra hoe iza no safidy mety indrindra aminao
Acetaminophen vs Aspirin: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Ny acetaminophen sy ny Aspirin dia samy voatendry hitsaboana tazo. Mampitaha azy ireo mifanila izahay mba hahafahanao manapa-kevitra hoe iza no safidy mety indrindra aminao
Acyclovir vs Valacyclovir: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Ny acyclovir sy Valacyclovir dia samy voatendry hitsaboana ny herpes. Mampitaha azy ireo mifanila izahay mba hahafahanao manapa-kevitra hoe iza no safidy mety indrindra aminao.
Adderall vs. Adderall XR: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Adderall sy Adderall XR dia mitsabo ny ADHD saingy miasa amin'ny fomba samihafa izy ireo. Ampitahao ny vokany sy ny vidin'ireto fanafody ireto hahalalanao hoe iza no tsara kokoa.
Abilify vs. Rexulti: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Abilify sy Rexulti dia mitsabo ny schizophrenia sy ny fahaketrahana, saingy tsy mitovy izy ireo. Ampitahao ny vokany sy ny vidiny hahitana hoe iza no tsara kokoa.
Afrin sy Flonase dia mitsabo ny fitohanan'ny orona fa miasa amin'ny fomba samihafa izy ireo. Ampitahao ny vokany sy ny vidin'ireto fanafody ireto hahalalanao hoe iza no tsara kokoa.
Aleve sy Ibuprofen dia voatendry matetika hitsaboana fanaintainana malefaka sy antonony. Mampitaha azy ireo mifanila izahay mba hahafahanao manapa-kevitra hoe iza no safidy mety indrindra aminao.
Allegra vs. Allegra-D: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Allegra sy Allegra-D dia mitsabo ny allergie saingy miasa amin'ny fomba samihafa izy ireo. Ampitahao ny vokany sy ny vidin'ireto fanafody ireto hahalalanao hoe iza no tsara kokoa.
Allegra vs. Claritin: ny tsy fitoviana, ny fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Allegra sy Claritin dia samy ampiasaina amin'ny fitsaboana ny soritr'aretin'ny allergy. Na dia mitovy aza, ny zava-mahadomelina tsirairay dia misy ny fahasamihafana izay ampitahaintsika mifanila.
Allegra vs. Zyrtec: ny tsy fitoviana, ny fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Allegra sy Zyrtec dia mitsabo ny allergie saingy misy tsy fitovizany. Ampitahao ny vokany sy ny vidin'ireto fanafody ireto hahalalanao hoe iza no tsara kokoa.
Ambien vs. Xanax: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Ambien dia mitsabo ny tsy fahitan-tory, ary ny Xanax dia mitsabo ny fitaintainanana, fa indraindray azo ampiasaina hanasitranana tsy fahitan-tory vetivety. Ianaro eto daholo ireo momba ireo zava-mahadomelina malaza roa ireo.
Amitiza vs. Linzess: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Amitiza sy Linzess dia mitsabo ny CIC sy IBS-C, saingy amin'ny fomba samihafa no fiasan'izy ireo. Ampitahao ny vokany sy ny vidin'ireto fanafody ireto hahalalanao hoe iza no tsara kokoa.
Amoxicillin vs. penicillin: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Amoxicillin sy penicillin dia mitsabo aretin-bakteria fa miasa amin'ny fomba samihafa. Ampitahao ireo fanafody antibiotika ireo hahitana hoe iza no tsara kokoa.
Ampicillin vs. amoxicillin: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Ampicillin sy amoxicillin no mitsabo ny otrikaretina bakteria, saingy tsy dia mitovy. Ampitahao ireo fanafody ireo raha te hahalala hoe iza no tsara kokoa.
Amoxicillin vs Augmentin: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Amoxicillin sy Augmentin dia samy voatendry hitsaboana aretina. Mampitaha azy ireo mifanila izahay mba hahafahanao manapa-kevitra hoe iza no safidy mety indrindra aminao.
Arimidex vs Aromasin: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Arimidex sy Aromasin dia fanafody fitsaboana ampiasaina hitsaboana ny homamiadan'ny nono. Na dia mitovy aza, ny zava-mahadomelina tsirairay dia samy manana ny fahasamihafany izay ampitahantsika mifanakaiky.
Armodafinil vs. modafinil: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Ny Armodafinil sy ny modafinil dia mitaky fikorontanan'ny asa (SWD), narcolepsy, ary ireo fepetra hafa. Ampitahao ireo fanafody ireo raha te hahalala hoe iza no tsara kokoa.
Aspirin vs Ibuprofen: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Ny Aspirin sy Ibuprofen dia samy voatendry hitsaboana fanaintainana vetivety. Mampitaha azy ireo mifanila izahay mba hahafahanao manapa-kevitra hoe iza no safidy mety indrindra aminao.
Atorvastatin vs. simvastatin: Fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Atorvastatin sy simvastatin dia mitsabo kolesterola avo nefa miasa amin'ny fomba samihafa. Ampitahao ny vokany sy ny vidin'ireto fanafody ireto hahalalanao hoe iza no tsara kokoa.
Ativan vs. Xanax: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Ativan sy Xanax dia samy mitsabo ny fitaintainanana fa tsy mitovy. Ampitahao ny vokany sy ny vidin'ireto fanafody ireto hahalalanao hoe iza no tsara kokoa.
azonao atao ve ny mandray claritin sy benadryl amin'ny andro iray?
vinaingitra paoma ho an'ny aretina masirasira amin'ny fivaviana
mety ho teknisianina fivarotam-panafody lasa mpivaro-panafody
afaka misotro aretina masirasira ve ny rano fisotro?
mety ve ny maka ibuprofen sy acetaminophen miaraka